Romafo 3 NA-TWI - Na sɛ saa na ɛte de a, na Yudaniyɛ - Bible Gateway
Romafo 2Romafo 4
Romafo 3 Nkwa Asem (NA-TWI)
3 Na sɛ saa na ɛte de a, na Yudaniyɛ no ho mfaso ne dɛn? Onyankopɔn dom wɔn biribi sononko anaa? Biribi wɔ Yudafo twetiatwa no mu? 2 Yiw, sɛ woyɛ Yudani a, ɛho wɔ mfaso bebree. Nea edi kan no, Onyankopɔn de ne mmara hyɛɛ wɔn nsa sɛnea ɛbɛma wɔayɛ n’apɛde. 3 Ɛyɛ nokware sɛ na wɔn mu bi nni no nokware. Na di a na wonni Onyankopɔn nokware no kyerɛ sɛ obebu ne bɔ a wahyɛ wɔn no so anaa? 4 Dabida! ɛwom sɛ obiara yɛ ɔtorofo de, nanso Onyankopɔn nyɛ ɔtorofo. Wokae nea oyi fii Israel Nnwom mu a ɛfa eyi ho a ɛka se, Onyankopɔn nsɛm bɛyɛ nokware daa no?